Cataclysm - WoW Guides | WoW Guides
Torolàlana ho an'ny andro / faran'ny fotoana
Torolàlana ho an'ny tranomaizina Faran'ny andro / Faran'ny fotoana, miorina ao amin'ny Caverns of Time ary ampiana ao amin'ny Patch 4.3.0. Ity dia ampahany amin'ny tantara mialoha ny fifandonana farany amin'ny Deathwing.
Ny ora amin'ny takariva / ora takariva
Torolàlana ho an'ny tranomaizina Ny ora amin'ny takariva hariva / ora an'ny takarivat, miorina ao amin'ny Caverns of Time ary ampiana ao amin'ny Patch 4.3.0. Ity dia ampahany amin'ny tantara mialoha ny fifandonana farany amin'ny Deathwing.
Torolàlana momba ny lavadrano / loharanon'ny mandrakizay
Torolàlana ho an'ny tranomaizina Lohasahan'ny Mandrakizay / Lohasahan'ny Mandrakizay, miorina ao amin'ny Caverns of Time ary ampiana ao amin'ny Patch 4.3.0. Ampahany amin'ny tantara talohan'ny fizarana farany miaraka amin'i Deathwing.
Zul'Aman Torolàlana mahery fo
Taloha lasa izay i Zul'Jin, Mpanafika ny Foko Amani dia resin'ny vondrona mpitsangatsangana fa nisy hery vaovao nifehy ny fiarovana an'i Amani, Ny Foko Zandalar.
Vol'jin, mpitarika ny foko Blackspear, dia manangona hery mpanohitra mba hamelezana ny fitsanganana indray ity ankolafy mpiady troll ity izay nitady valifaty ny olombelona sy ny elves noho izay nataony tamin'izy ireo taloha. Zul'Jin dia hanaiky fanampiana, na avy amin'ny Horde na ny Alliance.
Torolàlana mahery fo Zul'Gurub
Ny fiteny taloha dia milaza fa resin'ny vondrona mpitsangatsangana mahery fo i Hakkar sy ny mpiadiny. Nanomboka teo dia nanjavona tsikelikely ny tanàna, lanin'ny ala. Na izany aza, gurubashi mbola miziriziry ihany izy ireo ary tsy maintsy hajanona amin'ny rindrin'ny tanàna rava indray.
Misy sefo maromaro sy "mini-bosses" ao amin'ny Zul'Gurub, ary ankoatry ny fihaonana iray dia efa teo amin'ny lalao avokoa ny sefo rehetra taloha tao amin'ny kinova taloha. Na izany aza, niova ny mekanika na dia misy ifandraisany amin'ilay kinovan'ny tarika taloha aza.
Torolalana ho an'ny Deadmines / The Deadmines Heroic
Ny Mines of Death dia iray amin'ireo trano-maizina voalohany indrindra izay nataon'ny mpilalao World of Warcraft rehetra, indrindra ireo an'ny Alliance. Ao amin'ny Cataclysm, ity tranomaizina ity dia miaraka amina kinova mahery fo. Tsy dia hahafantatra zavatra momba ny trano-maizina ianao.
Ity tranomaizina mahery fo ity dia misy fihaonana 6, ny sasany amin'izy ireo dia tena sarotra. Ny sefo farany dia tsy iza fa i Vanessa Van Cleef, zanakavavin'ny mpitondra faralahy ny defias. Iray amin'ireo maherifo sarotra indrindra amin'ny Cataclysm io raha tsy manana fitaovana kely ianao ary mila fanaraha-maso olona ho an'ny humanoids raha te hahomby.
Narovan'ny sidina mena hatramin'ny taona vitsy lasa izay, ireo lalantsara voaozona ao Grim Batol dia naverin'ny Hammer Twilight, Deathwing, and the Old Gods. Tsy tambo isaina ny herin'ny Hammer Twilight ary toa tsy azo idirana ny fiarovana azy.
Ao amin'ity fonja 85 any amin'ny haavo Twilight ity dia tsy maintsy hanavotra ny dragona mena isika avy amin'ny fampijaliana azy ireo, handresy ny jeneraly mahery vaika indrindra amin'ny klôma ary farany, hiatrika an'i Erudax mpanompon'ny Andriamanitra taloha tao amin'ny efitrano feno olona iray. atody napetrak'i Alexstrasza tenany tao amin'ny fahababoana sy atody Twilight. Ireo rojo izay nitazona azy dia mbola mijanona amin'ny tany ihany, mampatsiahy ireo maherifon'i Azeroth ny vidin'ny tsy fahombiazana.
Torolàlana ho an'ny tanàna very an'ny Tol'vir / Tanàna very an'ny Tol'vir mahery fo sy mahazatra
Ny Tol'vir dia hazakazaka taloha niafina tao amin'ny tanàna miafina tany an'efitr'i Uldum. Ny fisiany dia efa tsy voamariky ny sisa tamin'ny hazakazaka, saingy ny fiverenan'i Deathwing tany Azeroth dia nahatonga azy ireo sy i Al'akir hiara-hiasa amin'ny fiaraha-miasa satria ny Tol'vir no hany hazakazaka tsy voakitika. Amin'ny ozon'ny nofo.
Ny tanàna very ny Tol'vir dia iray amin'ireo tsotra indrindra amin'ny Cataclysm ary natao ho an'ny mpilalao ambaratonga 84-85. Manana fihaonana 4 tanteraka izy ary atolotra (na dia tsy ilaina aza) ny fananana kilasy afaka mifehy ny Humanoids.